मन्त्री ज्ञ्यु सँग रङ्गमञ्चमय बनेको त्यो रमाईलो अनि यादगार रात … – Ekathmandunepal
Homeब्लगमन्त्री ज्ञ्यु सँग रङ्गमञ्चमय बनेको त्यो रमाईलो अनि यादगार रात …
मन्त्री ज्ञ्यु सँग रङ्गमञ्चमय बनेको त्यो रमाईलो अनि यादगार रात …
२९ मंसिर २०७४, शुक्रबार १३:२७ ekathmandu Nepal ब्लग 0
अरुदिन भन्दा भिन्नको रात्रीकालिन मन्त्री ज्ञ्यु सँग रङ्गमञ्चमय बनेको थियो त्यो रमाईदो अनि यादगार रात … हिजो साँझै बाट उनको फोन अफ छ । फेरी एक पटक फोन ट्राई गरें, नेपाल टेलीकमकी युवतीले फेरी उसं गरि भनिन ‘तपाईले सम्पर्क गर्न खोज्नु भएको मोवाईलको स्वच अफ गरिएको छ ।’ फेसबुक अन गरें, २१ घण्टा देखि उसले फेसबुक चलाएकी छैन भन्ने थाहा भयो ।
अफलाईन म्यासेज गर्न मन लागेन । घरबाट अफिस निस्कनै लाग्दा श्रीमतीले ढोकामा उभिएर भनी छोरालाई सन्चो छैन के गर्ने होला ? कुनै चासो नै नदेखाई भनें, जंचाउन लैजाउ न त ।अफिस पुगेर फेरी फोन गरें उसलाई, मोवाईल अफ नै रहेछ ।
काममा मन नै लागेन, क्यान्टीनमा गएर एक कप चिया र चुरोट पिएं । मन साह्रै असान्त थियो, उ देखेर रिस पनि उठ्यो कमसेकम मेरो मनले के सोच्ला भनेर त बुझ्नु पर्ने नी ।२ बज्यो यो बिचमा मैले उसको अफ भएको मोबाईलमा धेरै पटक फोन गरें । झट्ट सम्झीएं, उ कहिले काहीं कुरा गर्दा गर्दै बिना प्रशंग बोलिदिन्छे, ‘मलाई जीन्दगी प्रती मोह छैन, म कुनै पनि बेला मर्न सक्छु । तिमीलाई त म मरेको थाहा पनि हुँदैन ।’
हतपत म्यासेज गरें, काहाँ छौ तिमी ? फोन पनि अफ छ, साह्रै याद आईरअ‍ेको छ तिम्रो ।म्यासेज सेण्ट भयो, झट्ट सम्झीएं म्यासेज नगरेको भए हुने, साच्चै उसले आत्महत्या गरेकी भए यो म्यासेजले पुलिसको झमेला थप्न सक्छ । रिप्लाई आएन म्यासेजको । बिरामीको बहाना बनाएर छिट्टै निस्कीएं अफिसबाट । घर पुग्दा श्रीमती छोरालाई औषधी ख्वाउँदै थिई, देख्नासाथ सोधि कीन छिटो आउनु भयो ? तेस्सै मैले छोटो उत्तर दिएं ।कपडा फेरें, श्रीमतीले चिया दिंदै भनि खाजा खानुभयो ? अं खाईसकें फेरी अर्को झुट बोलें ।
हेक्का नै भएन तिमीले खाएउ त भनेर सोध्न पनि । उसो त म श्रीमतीले के खाई ,के लगाईमा ध्यान पनि दिंदीन । उसले चीत्त दुखाईन होली आज पनि, बानि परिसक्यो मेरो स्वभावको उसलाई । श्रीमती गै सकेपछि सम्झें छोरालाई औसधी ख्वाउँदै थिई, के भएको रहेछ भनेर सोध्नु पर्ने मैले । मेरो ध्यान सन्ध्याकै फोनमा थियो । यस्तो त कैलेहि भएको थिईन म । सन्ध्या मेरी फेसबुक फ्रेण्ड हो ।
ब्याचलर पढ्दै गरेकी २० बर्षकी सन्ध्यालाई मैले भेटेको पनि छैन, फोनमा कुरा हुन थालेको २ महिना भयो, तर म झापा र उ काठमाडौं भै दिंदा भेट्ने रहर रहरै बनेको छ । म भन्दा १४ बर्ष कान्छी त्यो केटीले म मा ठुलै प्रभाव जमाएकी छ । उ भित्रको बिचार, कुरा गर्ने शैली र मलाई बुझ्ने क्षमताले गर्दा म आजकल उसकै उमेर छेउछाउको पागल प्रेमी बनेको छु । उसको र मेरो सबै भन्दा मिल्ने स्वभाव किताव पढ्नु हो । उसलाई साहित्यमा साह्रै रुचि हुनु र म अंग्रेजी साहित्यको प्रोफेसर हुनुले पनि हामीलाई बाँधेको छ, जस्तो लाग्छ ।
आमा गर्विलो हुँदै भन्नुहुन्छ, मैले हेरेर ल्याएकी बुहारी पो हो त, यति माया त छोरीले पनि गर्दैनन् । एकदमै कम बोल्ने स्वभावकी छ उ । मास्टर्स गरेकी मेरी श्रीमतीको अहिले सम्म फेसबुक छैन । सिउँदो भरि सिन्दुर लगाउँछे उ, आज सम्म देखेको छैन उसले अध्यारो अनुहार लगाएको । ठुला ठुला आँखा, मिलेको दाँत, बाधेपनि बाटेपनि उत्तीकै सुहाउने उसको लामो कपाल । यी सबै कुराले उ म भन्दा दसौं गुणा राम्री छ ।
उ टीपीकल बुहारी छ, म छु मनको चन्चल । श्रीमतीको यो खाले स्वभावले गर्दा म पनि घरमा टीपीकल हजबेण्ड बनेको छु । श्रीमती कैलेहि ठुलो स्वरले नबोल्ने, जीस्काए पनि संधै लाज मान्ने, अह्राएको काम खुरुखुरु गर्ने, जीद्दी नगर्ने, हुँदा पनि केटा मान्छेले रित्तो महशुष गर्दो रहेछ । मेरो रित्तोपन र चन्चल स्वभाव आजकल फेसबुकमै सिमीत हुन थालेको छ ।
फेसबुकमा भेटीने कोही केटी संग रमाईला रमाईला कुरा गर्ने बानी परेको छ । यहि बानीले भेटीएकी सन्ध्या आजकल मलाई सबैभन्दा खाष लाग्न थालेको छ । सन्ध्या संग कुरा हुन थालेपछि मैले अरु केटीसंग च्याट पनि गर्न छोड्दिएको छु । ५ बज्यो सन्ध्यालाई फेरी फोन लगाएं, यस पटक फोन लाग्यो र उठाई पनि ।
रीसाउँदै भनें मोवाईल बिग्रीए पनि बाहिर कतै त फोन हुँदो हो नी, एक कल फोन गर्न सकीनौ ?न्रिसाउन । आज एकछिन फुर्सद भएन कलेजमा । हेर चिया सम्म खाएको छैन, प्राक्टीकल सकेर निस्कंदा भोकले मर्नै लागेको थिएं, तै पनि खाजा नखाई मोवाईल बनाउन दिएको ठाउँमा पुगें, उ लाडे पल्टदैं बोली ।म आज सम्म आफ्नी श्रीमती संग कैलेहि झर्केर पनि बोलेको छैन, रिसाउनु पर्ने ठाउँ नै दिंदीन उ । तर सन्ध्या संग झगडा नै गर्न तम्सन्छु ।
सानो बच्चालाई झै फकाउछे उ, सम्झाउँछे र कहिलेकाँही गाली पनि गर्छे । खुब राम्रो लाग्छ यी सब मलाई । दिन यसरी नै बित्दै गए, एक दिन म सन्ध्यालाई भेट्न काठमाडौं जाने भएं । रात्री बसमा काठमाडौ जाँदै थिएं एक पटक पनि निदाउन सकिन । मनमनै सोचें, उ कस्ती होली, केटाको उत्तउलो मन राती संगै बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने पनि सोचें ।
बिहान ९ बजे काठमाडौको नयाँ बसपार्क झरें, उ लिन आएकी थिई, चिनीहाली उसैले बसबाट झर्ना साथ । सोचेजती राम्री नलागेपनि हेर्नमा ठीकै थिई सन्ध्या । हाप पेन्ट र डार्क ब्लु रंगको टिसर्टमा उ सानो तिनो मोडल नै लागी मलाई । देख्नासाथ हाई समिर भनेकी उसले मैले कुनै उत्तर दिन नपाउँदै छातिमै टाँसिन आईपुगी । मैले पनि आफुलाई चलचीत्रको हिरो नै सम्झीएं त्यो बेला । म अलमल भएको देखेर उ नै बोली खाना बनाएर आएको छु गएर खाने अब ।
अनि कहाँ बसुलाँ भनेर आएको त । तिमी त्यति टाढा बाट मलाई भेट्न आएको छौ, मैले कोठामा पनि लगिन भने त तिमी माथि अन्यानै भै हाल्यो नी उ जीस्कीई । ट्याक्सीमा उसको चावहिलमा रहेको कोठामा पुगें । सिङ्गै फ्याट लिएर बसेकी रहिछ । फ्ल्याटको सजावट हेर्दा हुनेखाने परिवारकी छोरी रहिछे भन्ने लाग्यो । आफुले कलेज पढ्दा एउटा कोठा लिएर स्टोपमै खाना बनाएर खाएको दिन सम्झें ।
खाना खायौं, उसको जीस्कने बानी, चन्चले स्वभाब, बैंसालु यौवन सबै मेरो अगाडी थियो । तिमी एकछिन सुत म कपडा धुन्छु भनि उसले । रातभरीको अनिदो थिएं, उसको बेडमा निदाएं । २ बजे उसले उठाएर भनि अव राति सुत मेरो सपिङ गर्नु छ, सिटी सेन्टर जाउँ । हामी कमलपोखरी स्थीत सिटी सेन्टर पुग्यौं, उसले चाहिएजती सामान किनी, १५ हजारको बिल भएछ, मैले नै तिरिदीएं ।मुभी हेरेर फर्कने सल्लाह भयो, फिल्म सकेर राती फर्कीयौं हामी । बाहिरै खाना खाएर जाने भन्न थाली उसले, क्यान्डील नाईट डिनरको उसको रोमाञ्चकतामा मैले साथ दिएं ।
उदास आँखाले बिदा गरि मलाई सन्ध्याले । छोरालाई घरमा ल्याई सकेको थाहा पाएपछि सिधै घर पुगें । अफिसको काम छ भनेर सन्ध्यालाई भेट्न पुगेको थिएं । सोझी श्रीमतीले म पुग्नासाथ स्पस्टीकरण दिई, हजुर कामले काठमाडौं गएकाले मैले आमालाई बाबु लडेको कुरा नभन्ने भन्दै थिएं, आमाले मान्नु भएन ।
मनमनै खुशी भएं स्पस्टीकण त मैले दिनु पर्ने तर तक्दीर बलियो मेरो । दिन फेरी सामन्य हुन थाल्यो उहि अफिस, यहि घर ,उहि दिनचर्या । फेरीएको थियो त सन्ध्या संग कुरा गर्ने तरिका । त्यो २ रात उ संगै बसेपछि मलाई उ संग खुलेरै बोल्न मिल्ने वातावरण बनेको थियो । उसका म्यासेज कैले आउँछौ र तिम्रो याद आउँछ साह्रै भन्ने शब्दले नै भरिन्थे ।
एक दिन उसले दिउँसो फोन गरि र रुन्चे स्वरमा भनि समीर मेरो ममीको किड्नीमा स्टोन छ मैले यो कुरा तिमीलाई भनेको थिईन । के गर्ने गर्ने भएको छु आत्तीएर । मलाई यो कुराले नराम्रो लाग्यो नआत्तीउ केही उपाए लाग्छ भन्दै थिएं उसले मेरो कुरा पुरा नहुँदै भनि भएको पैसा ममीको उपचारमै खर्च भएको छ, भन्दा भन्दै ऋण पनि पाईएन । प्लीज हेल्प गरन म तिमीलाई तिर्छु ।
मलाई ५० हजार पठाईदेउ । तिमीलाई दुख दिन मन थिएन तर भन्ने कोही नभएर मागेको । उसको बोलीबाट यो प्रस्ट हुन्थ्यो की उ अप्ठेरोमा छे । मैले भोली पठाईदिन्छु भनें । घर गएं, भाईले आमालाई सिक्री बनाईदिनु भनेर ७० हजार पैसा पठाएको थियो हिजो मलेशियाबाट । त्यो पैसा घरमै थियो ।
मैले एउटा काममा लगानी गर्नु पर्यो म १ महिनामा बनाईदिन्छु भनेर पैसा मागें । आमा के काममा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, राम्रो काम हो पछि भन्छु भनेर टारें । भालीपल्ट ५० हजार उसको अकाउण्टमा हालिदिएर २० हजार आफ्नो अकाउण्डमा राखें । उसले खुषी हुंदै धन्वाद दिई फोनबाट ।
उ केहि नबोली कोठामा आई पछि पछि लागें म । कोठामा आएपछि उ झगडा गर्न थाली, मैले तपाईलाई आँखा चिम्लीएर बिश्वास गरें, जहाँ गएपनि जतिबेला आएपनि कैलेहि सोधिन । यहि बिश्वासको फाईदा उठाएर काठमाडौ सम्म केटी भेट्न पुग्नुभयो । सबलाई ढांटेर तेत्रो पैसा त्यो केटीलाई खर्च गर्दा सम्म म सोझी लोग्नेले राम्रै गरेको होला भन्ने सोचीरहें उ रुन थाली । कैलेही नरिसाउने र नबोल्ने मेरी श्रीमती ठुलो स्वरमा बोलेकी थिई, त्यो पनि मेरो गल्ती समाएर ।
७ बर्ष सम्म कैलेहि गुनासो नगरेकी श्रीमती रोईरहेकी थिई । मैले फकाउने कोषीश गरें तर आज उ हिजोकी श्रीमती भएर प्रस्तुत भईन । झगडाले ठुलै रुप लियो, जति सम्झाउँदा पनि उ साम्य नभएछि जे मन लाग्छ गर मेरो गलफ्रेण्ड हो उ भनिदिए रिसको झोकमा । उ अहिले नै यो कुरा आमालाई भन्छु र यो घरमा बस्दीन भन्दै उठी, आमलाई भन्न जान्छु भन्ने कुराले साह्रै औडाह भयो मलाई, रिसमा पुरोहितले बेद पढ्दैन भन्ने उखान झैं भयो, ढोकामा पुगेकी श्रीमतीलाई फर्काउन खोज्दा नमानेपछि हात छोडें मैले ।
के हो तपाईको पारा, यत्तीको पढेलेखेको मान्छेले लाज पनि मान्नु पर्ने, मेरो बैनी सस्तो भएर दिएको होईन, तपाईले जति उसले पनि पढेकी छ, ईज्तको परिवारकी छोरी भएर घर सम्हालेर बसेकी छ । ‘उनि बक्कीए., के जवाफ दिनु, होईन भन्ने बाटो नै थिएन, माफ पाउँ जेठान भन्न बचेंखुचेको अभिमानले दिएन, फोन काटीदिएं ।छोरा नहुँदा घर सुन्य भएको थियो अरु खाषै केहि भएन, ससुरालीले ठुलो कुरा गर्न थाले भने सन्ध्यालाई ल्याएर देखाईदिन्छु भन्ने सम्म सोचें दुईवटा श्रीमती कसको हुन्न र ?
उसले १ महिना पहिले फेसबुकमा ४ वटा फोटो अप्लोड गरेकी रहिछे, गएको तिजमा हामी आमा छोरी नाच्दै भनेर उसको आमा र उसको ३ वटा फोटो राखेकी रहिछे । संगै एउटा केटा संगको फोटो पनि । क्याप्सनामा लेखेकी थिई तिजको ब्रत उसको लागि, कस्तो छ मेरो र उसको जोडी ? कमेण्टमा सबैले बधाई र राम्रो जोडी भनेका थिए ।हेरेर हैरान भएं, उसले तिजको दिनमा ममीको अप्रेशन छ हस्पीटलमा छु भनेकी थिई । तिम्रो लागि ब्रत बसेकी छु भनेकी थिई । त्यही आईडीबाट म्यासेज गरे, किन गरेउ यो सब नाटक ?
मेरो पहिलो सेक्स अनुभव (263)
भर्जिन केटीलाई घरमा अर्धनग्न भेट्दा…. (241)
माइजु त कुकुरसँग मस्ती गर्दै हुनुहुन्थ्यो (208)
पुष्टिएकी सेक्सी बहिनीलाई (162)
मलाई पनि एकदमै योवनको मात चढेको थियो अनि (112)
के खाँदा कोलेस्टेरोल घट्छ २ मिनेट समय निकालेर अवश्य पढौं (111)
यौन इच्छा भएपछि महिलाले देखाउने ५ ब्यवहार..यस्तो… (69)
यी पोजिसनहरुमा सम्भोग गर्दा लामो समय सम्म गर्न… (60)
एक कोरियन युवतीको योनीको रौ फालिदि गरेको दृश्य… (5,420)
आबुई… कति ठूलो यो त मेरोमा छिर्दैन होला ?” (3,264)
घरबेटी दाइले जबर्जस्ती मेरो रातो पेन्टी भित्र हात छिराए (3,184)
थाहा पाउनुहोस्, यस्तो योनी हुने महिलाले धेरै यौन… (2,788)
जंगलमा महिलासंग यौन क्रिडा गरिरहेको भिडियो भाइरल… (2,652)
बहिनी भनेर के गर्नु , खाली अगाडि आएर तिघ्रा देखौने ,… (2,548)
दिदी अब त अति भयो यो भाईको भाईलाई अब स्वर्गको बाटो… (2,345)
बाबु अझ भित्रै, भाउजूले काम्दै भनिन्…देवर भाउजुको… (2,323)
मेरो होल नाइट’ ! युवा र युवतीले एकचोटी पढ्नै पर्ने… (2,296)
सामाजिक संजालमा फेरी लिक भयो एक जोडीको आपत्तिजनक… (2,196)
कक्षा १२ मा अध्ययनरत युवातीको गोप्य भिडियो लिक.घरमा… (2,188)
मेरो पहिलो सेक्स अनुभव (2,181)
राजा मलाई कुकुरले गरेको जसरी गर न कस्तो मज्जा आउछ (2,155)
तिर्सना बुढाथोकी अर्को उपर्दो नाङ्गै नुहाउदा नुहाउदै… (1,987)